Akpụkpọ ụkwụ na-edozi ejiji 2018 - nwa, ọbara ọbara, agba aja aja, matte, jaket, onyinyo, imecha nkecha
Ebube na-eme mkpirikpi 2018 - ejiji ejiji, usoro, echiche di mma
Ntucha nke matri nke 2018 bụ ihe a nụchara anụcha na nke mara mma, ma n'otu oge ahụ ebumnuche mbụ. O nwere ike ịbụ: usoro dịgasị iche iche na-eme na mgbanwe dị iche iche a na-apụghị ichetụghị echegharị , ndị gbakwunyere na rhinestones, kamifubuki na usoro mara mma dị iche iche, ma jikọta velvety na glossy n'otu oge.
Ejiri ihe eji eme ihe 2018 - ejiji ejiji
Ejiri ejiji na-emepụta 2018 dịka ma ọ bụrụ na ọ bụ maka fashionistas ndị na-ahọrọ unconventional na nkecha ngwọta. Kedu ihe ndị isi na-eduzi n'osisi nkedi?
Ejila ejiji na-acha otu agba na ogologo ogologo nkedo nkedo, ma obere ma na-emekarị anaghị adị ogologo oge. N'iji nlezianya mesie mkpịsị aka mkpịsị aka, usoro geometric, nkịtị, ihe na-acha okooko osisi na okooko osisi, ihe nkedo na-emepụta n'ọdịdị, ọdịdị, eserese ndị mmadụ na Slavic, ihe ndị India na Grik.
Ụdị ntu ahụ. N'elu ya, almọnd, ndị na-agba egwú na square dị nkọ, ọ bụghị dị ala karịa ha na-egosi na oval, ma stilettos na ọnụ na-enweghị isi ka na-eme ihere.
Usoro na ihe ndozi ọzọ. Na mgbakwunye na mpempe akwụkwọ, windbrushing na ihe ndị a na-ahụkarị, ọdịdị ahụ na - anọgide: nkedo, ihe miri emi , ihe nkedo, ihe ịchọ mma nke dị iche iche pebbles na ọnụ ọgụgụ ígwè.
Ntughari aka na 2018 maka mbọ aka
Ọdịiche dị mkpụmkpụ dị mkpirikpi 2018 ọ bụghị naanị na otu ụda, kamakwa ọ na-ejikọta ọmarịcha onyinyo ndị dị na pastel, ụda isi na agba aja aja, dịka ụda dị iche iche, na usoro nke onyinyo. Ihe kachasị mma na mbụ:
isi awọ na pink, ọcha na ọbara ọbara, nwa na ìhè;
acha odo odo, acha ọcha na agba ọchịchịrị: nwa, mmiri mgbochi mmiri, blue, bottle, khaki;
acha odo odo, odo odo, lilac na ụda ụda olu na-acha anụnụ anụnụ.
Ịgba mbọ na 2018 na mkpịsị aka dị iche iche ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị jikọtara dullness na gloss, mee ka ihe dị mma nke ọnwa, gbakwunye obere obere rhinestones, gbanwee ihe mgbochi dị n'akụkụ, mee ka ụkpụrụ dị na mkpịsị aka. Jikọta na otu ịkpụ aka abụọ ma ọ bụ atọ shades nke kacha agba, ma ọ bụ egwu dị iche, dịka ọmụmaatụ, mara mma - agba aja aja, isi awọ na pink, nkecha na-egbuke egbuke - agba agba na-acha odo odo na ọgaranya acha anụnụ anụnụ, green na burgundy.
Ejiri afọ 2018 maka mbọ ogologo
Ndị na-ahọrọ ntu oyi, maara na akara aka na ogologo mbọ nke ụdị 2018 na-emekarị, karịsịa n'ụdị almọnd ukwu na "ballerina", ọbụna na arụmọrụ zuru oke, bụrịrị nhọrọ dị oke mma kwa ụbọchị. Mmetụta na-adọrọ mmasị na-amasị m - lee anya na geometry nkịtị, ihe eji echebara echiche ma dị mma ma obere obere rhinestones, nke mbụ - nwa na odo, blue-black na beige-burgundy. Emela ka ọnọdụ ha dị nro dị nro, " iko a gbajiri agbaji ," nakwa na ọnụ ọgụgụ kachasị mma - ihe nchịkọta nke chaze na marble.
Ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ ụfọdụ dị irè banyere otu esi zere ịdị na-adịghị mma n'ụlọ ma nye gị aka ịkpụcha ahụ. Tupu ị na-etinye ihe na-adịghị ọcha:
mbọ dị mma iji polish, ebe ọ bụ na mkpuchi a dị nnọọ njọ maka obere adịghị ike na nkwụsị nke ntu;
iji tinye ha ihe bụ isi, nke mere na anaghị eri agba agba n'ime ntu ahụ;
Ọ gaghị ekwe omume ikpuchi mbọ na mmanụ na mmanụ na-edozi ahụ, n'ihi na mmetụta nke chọrọ "velvet" nwere ike ọ gaghị apụ.
Echiche nke manicure matt 2018
Iji mezuo mbọ aka na 2018, echiche ejiji nke oge ọhụụ jikọtara ihe niile a na-ahụ maka nkedo nke oge a.
Ezigbo igwe . Jiri nlezianya na-ele anya na mbọ aka na-acha ọcha na-acha uhie uhie 2018 n'ime oji, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara, turquoise, isi awọ na agba aja aja. N'adịghị ọcha, ma na-emekarị: edo edo, agba mmanụ agba na nchara ihu igwe. A na-eji ihe ntanetị, gel na shellac mee ihe, na ndị ọkachamara n'ụlọ nwere ndụmọdụ na-ahọrọ ọhụụ nke ụlọ ọrụ a ma ama, dịka ọmụmaatụ, OPI, El Corazon, MAC, ORLY na Golden Rose.
Nhazi mbụ . Egwuregwu nke ọdịiche, nkwụsịtụ na mkpịsị aka. Nchikota usoro di iche iche: ihe ngbacha na ohere nadighi nma, oke nke uzo ma obu uzo abuo na azhur, eserese, rhinestones, ihe onu ogugu, mkpo , eriri urographic na obere ocha. Eji ájá na-egbuke egbuke, pearl, mirror na ntụ ntụ ọzọ. Mpaghara na mkpuchi okpukpu abụọ na varnishes - matt na glossy, nchikota nke onu ogugu a na French, gradient.
Mbipụta na-ewu ewu . Na-achọ: akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ na obere na nnukwu agba, vegetative, ihe ịchọ mma anụ, agbụrụ agbụrụ, ihe mgbagwoju anya, akara egwu. N'aka ihu ọma: geometry, eserese na ntanetị. Ihe na-acha ọkụ na-acha ọkụ - ma ọ bụ "agbaji agbaji". Ndị ọkachamara nwere ahụmahụ abụghị nanị na-esetịpụ ụkpụrụ, ma na-agbasakwa ha site na sequins, rhinestones, na-egbu ma na-ehicha akwa na ihe ndị dị ndụ nke osisi na okooko osisi.
Ọkpụkpụ Black Matt 2018
Ihe magburu onwe ya gbakwunyere ihe oyiyi na-agba egwu ma na-emebiga ihe ókè ga-abụ mbọ aka 2018 na-acha odo odo, ma ọ bụghị n'ime ihe eji eme ihe. Ụdị ọdịiche:
Nchikota nke usoro na usoro di iche iche n'ime uzo, isi ihe, azhura, abstraction, space, stripes and rhombuses, nke gosiputa jaket, ohere na-ezighi ezi na mkpuchi zuru oke;
nkwenye dị iche iche dị iche na mkpịsị aka abụọ ma ọ bụ abụọ;
ngwakọta nke matte na glossy varnish, ma maka ikpuchi ntu ahụ dum, na maka ịbịaru ihe ndị e ji eme ihe;
eriri na ihe ndozi mara mma.
Ọkpụkpụ red matt 2018
Ihe ngwọta magburu onwe ya maka ọmarịcha ụta bụ ụda nke mbọ mbọ 2018 na ụcha uhie, ma ìhè na oge gboo, ma juputa ya. Ọ bụ ihe na-enweghị atụ n'onwe ya n'enweghị ihe ịchọ mma ọ bụla na "akpụkpọ ụkwụ" ma ọ bụghị ebe dị mkpụmkpụ. Ndị na-achọ ịdị na-ahụ maka ihe niile na-egbukepụ egbuke egbuke 2018 maka ụbọchị ọ bụla nwere ike ibelata kamifubuki na "iko agbaji." Maka oge mgbede - jiri nkume rhinestones mara mma na ihe ndozi mara mma, na-ese okooko ma ọ bụ ihe eji eme ihe n'ụzọ ịhụnanya.
Akpụkpọ anụ matrị 2018
Nhọrọ kachasị mma maka imetụ aka na foto azụmahịa - otu nchara agba agba agba odo odo 2018 na-emekarị-dịka ntakịrị, ma obere na ogologo. Newfangled na-enye ndị na-eduzi ndị isi:
rhinoceros a nụchara anụcha ma ọ bụ ihe enyemaka na otu, mbọ abụọ;
Mpaghara mpaghara ma ọ bụ iji ọtụtụ shades nke agba aja aja;
Ụkpụrụ volumetric na-ejide onwe ya na ntanetị nke na-eji nwayọọ nwayọọ 2018 na ihe osise nke osisi na okooko osisi na ụdị ndị China.
Ejiri afọ 2018 na rhinestones
Hitovym ga-abụ ogwe aka 2018, mbọ aka nke a na-eji akwa pebbles na-achọ mma, site na kristal nkịtị, na ọnụ ahịa ndị dị oké ọnụ na ndị dị oké ọnụ ahịa, nke a bụ onye nwere mmasị na ego ole. Rhinestones nwere ike ime dị ka ihe dị iche iche nke ihe ndozi ahụ, ma mesie ihe osise ahụ ike. Na-emekarị, ọmarịcha inlay na usoro ihe omume maka mmemme ntụrụndụ na ihe dị iche iche na-adọrọ adọrọ na njirimara dị nwayọọ.
Nchikota ihe omuma ihe ndi ozo di iche iche, dika ihe ndi ozo, ihe ndi na-acho n'igwe ma na agba ocha, oke nke ọnwa na n'akuku obosara, ihe ndi mmadu na-adighi ya. Ngwunye zigzags nke na-ezighị ezi na nkedo nkedo, kewaa ókè n'etiti ikuku na elu.
Nri ntu oyi 2018 na eserese
Kedu ụdị mbọ a na-eme na 2018 na-egosipụta na ngosipụta oge?
N'ọdị n'ihu ndị nna ukwu na-eduzi nsị dị nro na pink, peach, beige, acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ na ifuru, nke na-adịghị ọcha na nke anụmanụ, ihe ịchọ mma velvet dị ụtọ na ntakịrị ntakịrị nke obere kristal ma ọ bụ ihe oyiyi metal.
Akwụsị ụkwụ na 2018 maka mbọ mkpụmkpụ na oghere imeghe, obi, nke dị mkpa ọ bụghị nanị na oyi, kamakwa n'ehihie nke Ɛpo na mmalite nke oge opupu ihe ubi.
Ugboro abụọ na-egbukepụ egbukepụ na okooko osisi na osisi na-acha aka aka, monogram na curls, nke ejiri ntụpọ na pebbles, na "ọlaọcha" ma ọ bụ "ọlaọcha".
French 2018 na mkpuchi matte
Ejiri ejiji French na Hollywood na-amụmụ ọnụ ọchị na-acha odo odo, nwa, agba aja aja, na-acha ọcha na nke burgundy, ma jikọta jaket na mkpuchi zuru ezu ma ọ bụ ụkpụrụ dịgasị iche iche nke nwere uche. Ntughari aka nke 2018 na-ejikọta velvety na jaket na-egbuke egbuke na ụda ụda, ụcha ikpeazụ bụ ihe ọchị na ihe ịchọ mma na-ejikarị ntụpọ nke sprinkles, akwa envelopu ejiji, ma na isi ìhè na ebe na-adịghị mma.
Nri ntu oyi 2018 na onye gụrụ akwụkwọ
Nnukwu mkpịsị aka na mkpịsị uhie na 2018, nke na-ejikọta agbaji gbara agba na agba agba. Jiri nlezianya hụ ntụgharị: nwa na bordeaux, acha anụnụ anụnụ na oji, isi awọ na agba ntụ ntụ, egwuregwu nke na-acha ọbara ọbara, odo odo na marsala. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ 2018 na-enwe mmetụta sitere na ọchịchịrị, acha anụnụ anụnụ, burgundy na mgbochi mmiri, na-acha ọcha ọcha, n'otu mkpịsị aka. Ndị nwere mmasị na-acha odo odo na-acha odo odo-odo odo-pink, piich ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie na ntụ ntụ. Ndị na-ahọrọ ịdị nro, ọ bara uru ịbakwu anya na gradient ọhụrụ ahụ .
Akpụkpọ ụkwụ nke 2018 - geometry
Otu n'ime ebe ndị a na-eduzi na-ejikwa ihe mara mma nke matte mara mma nke 2018 na usoro iheomume. N'ihe ejiji, ọnụ ọgụgụ zuru ezu na geometry nkịtị, ngwakọta nke eriri, square, rhombuses, rectangles na zigzags, okirikiri, ovals, obere ntụpọ na eriri na obosara dị larịị, nke enyere site na mpempe akwụkwọ ígwè, ma dị iche ma ọ bụ na ederede nke lacquers. Nke a na-eme ka ọ bụrụ afọ 2018 zuru okè maka ụta na- agba kwa ụbọchị.
Akpụkpọ ụkwụ ejiji matrị 2018
Uwe eji ejiji ejiji 2014
Ònye ka chestnut nke ntutu nwere?
Oge mgbaaka ndị inyom 2015
Ombre na ntutu
Akpụkpọ ụkwụ na mkpịsị aka 2016
Ebube bright na ntutu isi
Na-eji efere 2015
Uwe nwanyị - oge mgbụsị akwụkwọ 2015-2016
Uwe ogologo oge na ngụsị akwụkwọ 2015
Agbamakwụkwọ uwe Dolce Gabbana 2015
Uwe ejiji ejiji 2014
Kedu otu esi eme akpa akpa?
Ejiji sneakers - 74 foto nke kacha mma ụdị si ama aha
Mmetụta dị arọ ọnwụ
Tebụl kichin obere
Chọọchị Ọtọdọks nke Atọ n'Ime Otu Dị Nsọ (Riga)
Kedu otu esi eme mkpọtụ?
Harpy - ihe omimi banyere ihe okike a
Kedu ụdị ụdị nwamba?
Nri site na nkume ogbe ohuru ohuru
A na-eji ejiji satin ribbons
Mmekọrịta nke vitamin na ibe ya na mineral
Kedu akwụkwọ ngebichi iji kpoo ụlọ ahụ?
Akwukwo akwukwo maka oria shuga
Ọ na-egbu egbu
Greenhouses maka okpomọkụ obi
Ọnụ ọnụ maka ịkpụ